Warshada isku dhafka la taaban karo ee SjHZS75-3E adeegyada macaamiisha Myanmar | Shantui
Warshada isku dhafka la taaban karo ee SjHZS75-3E waxay u adeegtaa macaamiisha Myanmar
Shantui Janeoo dhirta isku dhafka badda ee SjHZS75-3E waxay si guul leh u dhamaystirtay wax soo saarka culeyska culus ee Oktoobar 9,2020. Inta lagu jiro maalmo badan oo hagitaan fog, waxay furaysaa wadada si ay u abuurto qiimaha macaamiisha Myanmar.
Iyada oo ay saamaysay xaaladda faafitaanka, injineerka adeegga iibka ka dib ma aadi karo goobta Myanmar si uu u hago. Shantui Janeoo waxay siisaa hagidda fog ee internetka si ay u bixiso adeegyada rakibaadda iyo komishanka. Sababo la xiriira horumarka gaabis ah ee dhismaha goobta, rakibiddu sidoo kale waa kala go'a, waaxda taageerada adeeggu waxay ka gudubtay dhibaatooyin badan si ay u hagto macaamilka si dulqaad leh. Ka dib ku dhawaad ​​4 bilood oo shaqo adag ah, warshadda isku dhafka ah ee badda ee SjHZS75-3E waxay ugu dambeyntii xaqiiqsatay wax soo saarka culeyska culus. Macmiilku aad buu ugu qanacsan yahay saamaynta qalabka.
Tallaabada xigta, Shantui Janeoo waxay isticmaali doontaa tignoolajiyada cusub si ay u wanaajiso hababka iyo hababka hagitaan fog si loo hagaajiyo waxtarka hagida fogaanta shisheeye iyo in la hubiyo in alaabta tayada sare leh loo keeno macaamiisha qaab gaar ah.